Baarlamaanka CIRAAQ oo u codeeyey in dalka laga saaro ciidanka Mareykanka - Caasimada Online
Home Dunida Baarlamaanka CIRAAQ oo u codeeyey in dalka laga saaro ciidanka Mareykanka
Baarlamaanka CIRAAQ oo u codeeyey in dalka laga saaro ciidanka Mareykanka
Baghdad (Caasimada Online) – Baarlamaanka Ciraaq ayaa meel mariyey qaraar ku baaqaya in dalka laga saaro ciidamada shisheeye ee ku sugan, oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka, kadib xiisaddii ka dhalatay dilkii Qassem Soleimani oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka.
Qaraarka ayaa lagu sheegay in dowladda ay ballan qaaday in ay ka laabaneyso codsigii ay isbaheysiga caalamiga ah uga dalbatayt inay gacan ka siiyaan dagaalka kooxda Daacish, maadaama lasoo gabagabeeyey howlgalkaas isla markaasna laga gaaray guul weyn.
Sidoo kale Baarlamaanka ayaa ka codsaday dowladda Ciraaq inay mamnuucdo in sinaba ay xoogagga shisheeye u isticmaalaan dhulka, cirka iyo biyaha Ciraaq.
Qaraarada kasoo baxa baarlamanka ma ahan sharci, sidaas darteed xukuumadda kuma qasabana inay ciidamada Mareykanka ka saarto Ciraaq. Si ciidamada Mareykanka looga saaro Ciraq waa in baarlamanka uu ansixiyaa sharci, waxaana la filayaa in mar aan dheereyn lasoo saari doono sharciga.
Si kastaba, Rai’sul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa sheegay in dalka uu wajahayo dhibaato gudaha iyo Debadda ah isla markaasna go’aanka kasoo baxay Baarlamaanka uu yahay mid aad ugu wanaagsan dalka Ciraaq. Wuxuu horey ugu baaqay baarlamanka inay ansixiyaan sharci lagu eryayo ciidamada Mareykanka.
Qaraarka la ansixiyey Maanta ayaa waxaa Baarlamaanka hor geeyey Ra’isul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi oo u ololeenayey in dhamaman ciidamada Shisheeyey laga saaro dalka Ciraaq.
5,00 kun oo Askari ayaa Mareykanka ka joogo dalka Ciraaq, waxayna intoo badan yihiin taliyayaal dhanka Militariga ah .
Go’aanka kasoo baxay Baarlamaanka Ciraaq ayaa imaanayo xilli dhawaan uu mareykanka Garoonka Diyaaradaha Ciraaq duqeyn ku dilay Qassem Soleimani oo ahaa Jeneraal aad looga qadariyo dalka Iiraan.
Iran ayaa saameyn weyn ku leh Ciraaq, waxaana la rumeysan yahay in dilka Soleimani uu ahaa qalad siyaasadeed weyn oo ka dhacay Mareykanka, kuna weyn doonaan joogitaankooda Ciraaq.